Mankany amin'ny ho avy tsy misy fitaovam-piadiana niokleary - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Mankany amin'ny ho avy tsy misy fitaovam-piadiana niokleary
26 / 10 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary dia manokatra ho avy vaovao ho an'ny zanak'olombelona
Firenena 50 (11% amin'ny mponina eran-tany) no nanambara fa tsy ara-dalàna ny fitaovam-piadiana niokleary.
-Rarana ny fitaovam-piadiana nokleary toy ny fitaovam-piadiana simika sy biolojika.
-Ny Firenena Mikambana dia hanainga ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary amin'ny volana Janoary 2021.
Tamin'ny 24 Oktobra, noho ny fampidirana an'i Honduras, dia tonga ny tarehimarika firenena 50 nanaiky ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (TPAN) navoakan'ny Firenena Mikambana. Tao anatin'ny telo volana dia hanomboka iraisam-pirenena ny TPAN amin'ny hetsika iray ao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana any New York.
Aorian'io hetsika io, TPAN dia hanohy amin'ny làlana mankany amin'ny fandrarana tanteraka ny fitaovam-piadiana niokleary. Ireo firenena 50 ireo dia hitohy hanatevin-daharana an'ireo 34 izay efa nanao sonia ny TPAN ary miandry ny fankatoavana azy sy ireo 38 hafa izay niasa sy nanohana ny fananganana azy ao amin'ny ONU. Mety hipoitra ny fihenjanana any amin'ireo firenena sisa tavela noho ny fanerena avy amin'ny hery nokleary hampanginana ny safidim-bahoaka, saingy, amin'ny tranga rehetra, ny olom-pirenena no tsy maintsy manandratra ny feontsika ary manery ny governemantantsika hihetsika. manatevin-daharana ny fitarainana manohitra ny fitaovam-piadiana niokleary. Tsy maintsy ataontsika izay hitomboan'ny fitarainana mandra-pahatonga ny hery niokleary hitokantokana, raha ny olom-pirenenan'izy ireo kosa dia mitaky ny hiditra ao anatin'ny fitandroana ny fandriam-pahalemana ary tsy hampiroborobo ny loza.
Dingana goavambe izay manokatra ny fahafaha-manao tsy takatry ny saina hatramin'ny farany
Ny fidirana an-tsokosoko ao amin'ny TPAN dia dingana lehibe iray izay manokatra ny fahafaha-manao mandra-pahatongan'ny tsy azo eritreretina. Heverinay fa ny biriky voalohany nesorina tamin'ny rindrina noravana, ary ny fahombiazana dia famantarana iray izay azo hitohizana ny fandrosoana. Mety hiatrika ny vaovao manan-danja indrindra isika tato anatin'ny folo taona farany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na dia tsy misy na dia kely aza ny vaovao ao amin'ny haino aman-jery ofisialy (fampielezana), dia maminavina izahay fa hivelatra io dinamika io, ary haingana kokoa rehefa hita miharihary ireo fihetsika miafina sy / na tsy mahomby ataon'ny hery manjaka ireo.
Ny mpiorina voalohany an'io zava-bita io dia ny Fanentanana Iraisampirenena hamongorana ireo fitaovam-piadiana niokleary (ICAN), mpandresy tamin'ny loka Nobel fandriampahalemana tamin'ny taona 2017, izay nanondro tao amin'ny kaonty twitter ny maha-zava-dehibe ny hetsika, izay hanan-kery manomboka 22 Janoary 2021.
Tao anatin'ny Diabe Iraisam-pirenena farany teo dia hitantsika fa na dia any amin'ireo firenena izay manohana ny TPAN aza ny governemanta dia tsy mahalala izany ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Raha jerena ny toe-draharaha iraisam-pirenena misy ny fifanolanana sy ny tsy fahazoana antoka ny amin'ny ho avy, ao anatin'ny areti-mandringana izay misy fiatraikany amintsika, dia tototry ny fambara ratsy sy ny “vaovao ratsy”. Noho izany, raha te hanohana azy amin'ny fomba mandaitra kokoa, dia manolo-kevitra ny tsy hitaona ny tahotra ny loza nokleary amin'ny maha mpanentana antsika, fa ny mifanohitra amin'izay indrindra dia manantitrantitra ny antony nankalazana ny fandrarana.
Ny fikambanana World without Wars and Violence (MSGySV), mpikambana ao amin'ny ICAN, dia miasa mba hanao fankalazana lehibe amin'ny 23 Janoary ho fahatsiarovana an'ity dingana manan-tantara ity. Hanana ny endrika virtoaly amin'ny antoko cyber izany. Tolo-kevitra misokatra ary asaina hanatevin-daharana azy ireo vondrona liana, mpisehatra ara-kolontsaina ary olom-pirenena. Hisy ny fitsidihana virtoaly ny tantara manontolo amin'ny ady atao amin'ny fitaovam-piadiana niokleary: fanentanana, kaonseritra, diabe, forum, fihetsiketsehana, fanambarana, hetsika fanabeazana, symposia siantifika, sns. Hanampy amin'izany ny karazana hetsika fandraisana anjara amin'ny mozika, kolontsaina, zavakanto ary ny olom-pirenena amin'ny andro fankalazana ny planeta.
Hamboarinay ity hetsika ity amin'ny serasera sy haino aman-jery manaraka.
Androany izahay dia mandray anjara amin'ny fanambaran'i Carlos Umaña, talen'ny iraisam-pirenena ICAN, izay nilaza tamim-pifaliana hoe: "Andro manan-tantara ity anio ity, izay manamarika dingana iray lehibe amin'ny lalàna iraisam-pirenena manohana ny fitaovam-piadiana nokleary ... Tao anatin'ny 3 volana, ofisialy, ny fandrarana dia ho lalàna iraisam-pirenena. Manomboka amin'ny vanim-potoana vaovao izao… Andro fanantenana ho an'ny anio ”.
Izahay koa dia manararaotra misaotra sy miarahaba ireo firenena nanamafy ny TPAN sy ireo fikambanana, vondrona ary mpikatroka rehetra izay niasa ary nanohy nanao izany mba hanombohan'ny Olombelona sy ny planeta handeha amin'ny lalana mankany amin'ny famongorana ny fitaovam-piadiana niokleary. Izany dia zavatra iarahantsika manatanteraka. Tianay ny hanao fanamarihana manokana ho an'ny Peace Boat izay, avy any Japon, tamin'ny andro fankalazana, dia nahatadidy sy niaiky ny asa izay notanterahin'i MSGySV ho an'ny fampielezan-kevitra ICAN momba ny TPAN nandritra ny dian'ny WW2 manontolo.
Manohy miasa miaraka amin'ny rehetra izahay ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy herisetra. Anisan'ireo hetsika vaovao kasaina hatao, ny MSGySV dia hanao webinar iray natokana ho an'ny mpianatra sy mpampianatra avy amin'ny oniversite isan-karazany ao anatin'ny sehatry ny andiany iray izay notendren'ny Sekretera Maharitry ny Vovonana Nobel Peace Laureates tao anatin'ny volana ho avy. Ny lohahevitra dia ny: "Fihetsiketsehana eo amin'ny sehatra sosialy sy ny fiakaran'ny sehatra iraisam-pirenena"
Miaraka amin'ny fanosehana ireo sy ny hetsika maro hafa ho avy, dia manamafy ny fanambarana nataonay izahay tamin'ny 2 Oktobra tamin'ny fanaovana ny Diabe Iraisam-pirenena faha-3 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny 2024.
Lisitry ny firenena nanaiky ny TPAN
Antigua sy Barbuda, Aostralia, Bangladesh, Belize, Bolivia, Botsoana, Nosy Cook, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ekoatera, El Salvador, Fiji, Gambia, Guyana, Honduras, Irlandy, Jamaica, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Lesotho, Malaizia , Maldives, Malta, Mexico, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palau, Palestine, Panama, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, South Africa, Thailand , Trinidad sy Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezoelà, Vietnam.
Ny lahatsoratra tany am-boalohany dia hita ao amin'ny tranokalan'ny Pressenza International Press Agency: Ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary dia manokatra ho avy vaovao ho an'ny zanak'olombelona.